Vavaka ho an'ny Virjin'i Montserrat ho an'ny vehivavy bevohoka. ? [+ Mahery! ]
Vavaka ho an'ny Virjiny Montserrat ho an'ny vehivavy bevohoka natolotry ny fiangonana katolika rehetra el tontolo, Io fiangonana io ihany no nananganana ny vavaka ho an'ny Virjin'i Montserrat ho an'ny vehivavy bevohoka satria iray amin'ireo solontenan'ny Maria Virjiny Fantany tsara hoe inona izany ny fihetsehana fiainana ao anaty kibo ary afaka manampy amin'ny fizotran'ny fihetsehana manontolo.
Ny vavaka dia fitaovam-piadiana mahery vaika azontsika ampiasaina isaky ny mila izany isika na inona na inona toe-javatra iainana.
Ny soratra masina dia mampanantena fahagagana lehibe ho an'ireo izay mangataka ny fidirana amin'Andriamanitra.
1 Vavaka ho an'ny vehivavin'ny Montserrat ho an'ireo bevohoka Iza no Vadin'i Montserrat?
1.1 Vavaka ho an'ny virjin'i Montserrat ho an'ireo vehivavy bevohoka
2 Hanampy ahy ve io virijina io?
Vavaka ho an'ny vehivavin'ny Montserrat ho an'ireo bevohoka Iza no Vadin'i Montserrat?
Fantatro ny fomba Ny Moreneta, hatramin'ny nisehoany teo an-tampon'ny tendrombohitra dia tsy nitsahatra ny hanome fahagagana ho an'ny mino rehetra mila anao.
Tamin'ny taona 1881 no nitrangan'ny Dada Leo XIII Ambarako azy ho iray amin'ny patron ny diosezin'ny tanànan'i Catalonia izy ary nanomboka tamin'izay dia ankalazaina isaky ny 27 aprily ny androny.
Raha ny amin'ny fisehoany, dikanteny roa no fantatra, na izany aza ny fantatra amin'ny azo antoka tanteraka dia ity sary ity izay avy any an-danitra miaraka amin'ny tanjona hanamafisana ny finoantsika amin'ny fahalalana fa misy fahagagana misy ary manana ny tarehin'i Maria Virjiny mitovy.
Ankehitriny fantatrao ilay valan-janon'i Virjin'i Montserrat momba ny vehivavy bevohoka, andao hivavaka.
Maria, renin'ny fitiavana tsara tarehy, zazavavy mahafatifaty avy any Nazareta, ianao izay nanambara ny fahalehibiazan'ny Tompo ka nanao hoe "eny", dia nanao ny tenanao ho renin'ny Mpamonjy anay sy reninay: anio dia mihainoa ny vavaka ataoko aminao: Ao anatiko mitombo ny fiainana vaovao: kely iray izay hitondra fifaliana sy fifaliana, ahiahy sy tahotra, fanantenana, fahasambarana ho an'ny tranoko.
Tandremo io ary arovy izy io eo am-pofoako.
Ary izany, ao anatin'ny fotoana nahaterahana sambatra, rehefa mandre ny feon'izy ireo voalohany aho ary mahita ny tanany kelikely, afaka misaotra ny Mpamorona aho noho ny fahagagana amin'ity fanomezana nomeny ahy ity.
Amin'izay, manaraka ny ohatra sy modely nataoko dia afaka miaraka aho ary mahita ny zanako mitombo.
Ampio aho ary ampaherezo ahy hahita trano fialofana ho ahy ary, mandritra izany fotoana izany, dia toerana iray hanombohana ny làlan-kalehanao manokana.
Ry Neny koa, jereo manokana ireo vehivavy miatrika ity fotoana ity irery, tsy misy tohana na tsy misy fitiavana.
Enga anie izy ireo hahatsapa ny fitiavan'ny Ray ary hahita fa ny zaza rehetra tonga eto amin'izao tontolo izao dia fitahiana.
Ampahafantaro azy ireo fa ny fanapahan-kevitry ny maherifo handray sy hikolokolo ny zaza dia raisina an-tsaina.
Ry Andriambavinay Miandry Fatratra, omeo azy ireo ny fitiavanao sy ny herimpo.
Tianao ny vavaka ho an'ny Vondron'ny Montserrat ho an'ireo vehivavy bevohoka?
Amin'izay fotoana izay bevohoka foana izy, dia feno alahelo ny metaly fa ny ataony dia manova ny Paz y filaminana dia tokony hanana fotoana toa izany ianao no antony mahatonga ny vavaka ho lasa fialofana izay haleha rehefa tonga ny tsy fahatomombanana.
Mivavaha amin'ny Vadin'ny vehivavy bevohoka izao!
Hanampy ahy ve io virijina io?
Isaky ny angatahana fanampiana amin'ny maha reny tsara izy, dia hantsoinay izany.
Izany no antony tsy maintsy hanananao finoana tsy miova fa mino fa hahazo ny fanampianao mandrakariva isika.
Tsy maninona na ho antsika na ho an'ny namana na olom-pantatra, ny vavaka Manana hery foana izy io raha atao amin'ny finoana sy avy amin'ny fanahy.
Manantena aho fa tianao ny vavaka mahery nataon'ny Virijirano Montserrat ho an'ireo vehivavy bevohoka.
Vavaka ho an'ny Virjin'i Juquila
Ny vavaka ho an'ny Virjin'i Guadalupe